Doorashadii Puntland Iyo Dr Cali Ciise Cabdi Oo Ilaa Hada Ugu Cadcad, Lana Yimi Qorshayaal Loo Riyaaqay
January 1st, 2019 Ruugcadaa
Ugu horayn sanad wanaagsan dhammaan asxaabta, ehelka iyo ummada Soomaaliyeed. Illaahay waxaan inooga baryayaa inuu sanadkani noqdo mid nabadeed, barwaaq, dalkeenana ka dhiga dal ay dowladdu ku wada fiday.
Xikmado Nolosha ku saabsan
1- Inaad dhanka wanaagsan wax ka eegtaa macnaheedu maaha oo keliya inaad mar walba faraxsanaato sidoo kale waa inaad garato wakhtiyada adag in ay weli jiraan maalmo wacan oo ka dambeeya.
Doorashada Puntland: Iska akhriso ha ba dheeraado e.
December 31st, 2018 Ruugcadaa
Soomaalidu waxa ay ku maahmaahdaa, “wadaantii isha ka qaloocata faylka ayaa ay la tagtaa”. Waxa ka le oo ay ku maahmaahaan, ” laba is haysta haddii aad aragto heshiiskoodii hore ayaa xumaa”. Maamulka Puntland waxa wada dhistay tol wada dega oo ka la dega deegaanno lix gobol oo 18-kii gobol ee Soomaaliya ka la hoos taga. Sool, Sanaag, Togdheer, Bari, Nugaal iyo Mudug.
Cabdiraxman Faroole Oo Soo Bandhigay Waxqabad La’aantii Cabdiweli Gaas Oo Quus Taagan
Halkudhig baa ahaa Rag is galay kala gallad La’, madaxweynihii horey u soo maray Puntland Mudane Cabdiraxmaan Faroole oo ka tirsan aqal ka sare ee dawlada federaalka soomaaliya, alla muxuu toosh weyn ku ifiyey Cabdiweli Gaas Oo uu haatan waagu ku beryey.
Danta Puntland baa ku jirta Doorashada Dr: Cali Ciise.
Heer #Caalam iyo heer #Qaran ba hadduu ku guulaystay, inuu #Hoygiisa ku soo laabto waa himilo cusub.Dr. Cali Ciise Cabdi waa haldoor caalami ah oo dunida wax badan u soo qabtay. Waddamo waawayn oo African iyo Carab ba leh buu abaal u galay oo dhisitaanka dhaqaalohooda iyo fadhiisinta miisaaniyadooda gacan ka gaystay.
Xaasid Iyo Dhabcaal Midna Faa’iiddo Malaha!!
December 28th, 2018 Ruugcadaa
Waxa la yidhi Nin Boqor ah oo xukumi jiray mid ka mid ah Boqortooyooyinkii Qadiimiga ahaa ee dunida soo maray , ayaa Maalin maalmaha ka mid ah Casuumay laba Nin oo ka mid ahaa dadkii degenaa Magaalada xarunta u ah maamulkiisa.
Labadaas nin ee uu Boqorku casuumay waxay kala ahaayeen Ninkii Magaalada ugu Bakhayl sanaa iyo Ninkii ugu Xaasasid sanaa.
DR Cali Ciise Cabdi Oo Imaanaya Garoowe,Oo Una Sharaxan madaxweyne
Wararka aanu helaynaa waxay sheegayaan Dr Cali Ciise Cabdi iyo wafuud uu hogaaminayaa waxay ku soo fool leeyihiin magaalada Garoowe, inkastoo ay shalay baaqdeen.
Ku cashee digir habeenkii
December 27th, 2018 Ruugcadaa
Digirtu waxaa ka buuxa faaiiddooyin badan oo ay ka mid yihin
1-protein ,proteinka laga helo digirta waxaa ku yar baruurta.
2-digirta waxay qani ku tahay oo ka buuxa maadada irone ka oo ah maado ka hortagto dhiig yarida.
3-digirta waxay kor u qadaa xasuusta iyo garaadka sababtoo ah waxaa ka buuxa vitaminka B1 oo ah vitamin la shaqeya unigyada maskaxada.
4-digirtu waa badar u fiican caloosha iyo socdsiinta caloosha.
5-digirtu waxay yareysaa cayilka iyo jirka in uu yeesho baruuur saaid ah.
6-digirta waxay dhistaa lafaha iyo murqaha.
December 24th, 2018 Ruugcadaa
Waxaa ka soo wareegtey sadex sano, markii si qassab ah la iiga soo saarey Dalkii aan deganaa, waxaa maskaxdayda ka guuxaysey hadal nin maalin igu yidhi oo ahaa “Waxaan kugu Celin doonnaa Dalkii Gaajada”.
Dr Cali Ciise Cabdi Ma Isu Soo Sharaxayaa Madaxweynaha Puntland Sanadka 2019ka?!!
December 24th, 2018 Iftiinshe
Markaad fiirisid baraha bulshaweynta soomaaliyeed ay wararka ku kala qaataan waxaa buux dhaafiyey hadal haynta Dr Cali Ciise Cabdi oo ay leeyihiin wuxuu isu soo taagayaa doorashada madaxweynenimada Puntland ee sanadka 2019ka, warkaasi maxaa ka jira?
Qaraxa Folkaanaha jasiiradahaasi ka qarxay ayaa loo sababeeyey dhul go’ badda hoosteeda ka dhacay taasina ay keentay iney mowjado waaweyn badda ka soo kacaan.
Image captionDambaska Folkaanaha Anak Krakatau oo cirka isku shareeray
Dadaal xooggan oo gurmadka degdegga ah ayaa ka socda jasiiradaha ay masiibadu ku habsatay iyada oo waddooyinka go’ay furitaankooda laga shaqeynayo.
Image captionSawir muujinaya qaraxa Folkanaha Anak Krakatau
Image captionMuuqaal Satalite oo muujinaya Folkaanaha Ana Karalatau oo qarxay Bisha August
Image captionBandhig faneed socday xilliga ay duufaantu dhaceysay
Duufaanta ku dhufatay jasiiradaha Sumatra iyo Java maalinti Sabtida waxaa ku burburay dhismayaal aad u badan waxaana intooda badan go’ay ama ay biyuhu qarqiyeen waddooyinka jasiiradahaasi ku yaallay.
Image captionJaantus muujinaya Folkaanaha Tsunami
Image captionDadka degganaa Deegaanka Pandeglang oo duufaanta kaddib masaajid gabbaad ka dhigtay
Image captionSawirka qarxa Folkanaha Anak Krakatau
Image captionSawir muujinaya Qaraxa Folkaanaha Anak Karakatoa
Jasiiradda uu Folkaanahaasi ka qarxayna gabi ahaanba wey baaba’day.
Khilaafka u dhaxeeya Axmed Madoobe & baarlamaanka Jubaland oo sii kordhay
December 23rd, 2018 Iftiinshe
Waxaa cirka isku sii shareeraya khilaafka u dhaxeeya maamulka uu hoggaamiyo Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) iyo Golaha Baarlamaanka maamulka Jubaland, iyadoo arrimaha ugu waaweyn ee la isku heysto ay ka mid yihiin meel marinta sharciyo uu maamulku doonayo inuu marsiiyo Baarlamaanka.
Dagaal-yahankii “ugu xumaa” ee soo mara Colombia oo la dilay
Hoggaamiye mucaarad ku ahaa Colombia ayaa la helay isla markaana la dilay, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi. Walter Arízala, oo caan ku ah magaca Guacho, ayaa lagu raad joogay, isagoo loo haystay dilka weriyeyaal u dhashay dalka Ecuador iyo darawalkooda horraantii sanadkan.
SI AAYAN TAARIIKHDU U LUMIN (Xaji Faarax Xayd)QAYBTA 6AAD
December 21st, 2018 Ruugcadaa
Decembar 15, magaalada Addis Ababa dagaal ka bilowday oo diyaarado** bilaabeen inay magaaladii duqeeyaan. Waxaan kale oo maqalay in boqor Xayle Silaase ku soo laabtay dalka oo ku soo degay saldhiga ciidamada Maraykanku lahayeen Ethiopia oo la odhan jiray Kagnew oo ku yaalay Asmara.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya “Mooshinkii wuu buray
Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa war saxaafadeed uu caawa soo saaray ku sheegay in mooshinkii xil ka qaadista ee laga soo gudbiyey Madaxweynaha JFS Sagaalkii bishaan uu Jabay.
Muuse Biixi Mustafe Cagjar Oo Kulmaya
December 20th, 2018 Ruugcadaa
Wararka aanu ka helayno magaalada Jigjiga waxay sheegayaan berito waxaa Kulmaya Muuse Biixi iyo madaxweynaha Somali State Mudane Cagjar, goobta loo qoondeeyey kulankaasina waa degmada Wajaale oo hada qabanqaabadii ka Socoto.
Mareykanka Ayaa Soomaaliya Siinaya Lacag Gaadhaysa $900 million!
December 18th, 2018 Ruugcadaa
Mareykanku wuxuu sheegayaa in howlihii banii’aadnimada uu ku dari-doono kaalmo kale oo dhanka waxbarashada, deyn cafinta, shaqo-abuurka iyo dowladda wanaagga ah!
Waa Kuma Mulkiilaha Sahan Research Oo Ay Dowladda Soomaaliya Shaqo Joojinta Ku Sameysay
Wasaaradda Amniga Gudaha Soomaaliya ayaa shalay qoraal ay soo saartay shaqada kaga joojisay hay’adda cilmi-baarista Sahan Research oo fadhigeedu yahay magaalada Nairobi, xafiis-yana ku leh Muqdisho, Hargeysa iyo UK.
Xilli ay sare u sii kaceyso xiisaadda siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya, isbuucyadii la soo dhaafay ayuu qalalaasahan galay wajiyo cusub. Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, oo khudbad dheer jeediyey mar uu la hadlayey shacabka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Dooxa, ayaa u muuqday in uu ka hadlayay khilaafka taagan, wuxuuna sheegay in aanan marnaba lagu qasbi Karin wax aan sax ahayn.
Kii Hunguri Wadaaba Ha Ku Hadaaqo Gobolka Sool Baan Xoraynayaa!!
December 17th, 2018 Iftiinshe
Maamul goboleedka Puntland waxaa la filayaa 08/01/2019 in ay ka qabsoonto doorashadii madaxweynimada Puntland oo iyadu ah mid ka duwan doorashooyinkii horey u soo maray, musharaxiinta qaarkoodna waxayba u muuqdaan kuwo aflaam matalaya iyo kuwo ku hadaaqaya gobolka Sool baanu xoraynaynaa, balse aan ka run ahayn ee uu xaalkoodu yahay awrku kacsi iyo kursi ku raadsasho!!!……..
Faa’iidooyinka Caafimaad ee laga helo Looska.
December 16th, 2018 Iftiinshe
Loosku waxa uu ka mid yahay qoys dhireedka loo yaqaan Fabaceae wuxuuna xiriir la leeyahay Digirta, Lentils iyo Soy wuxuuna asal ahaan kasoo jeedaa Latin America Waqooyiga galbeed ee dalka Argentina ama Koofurta Bari ee dalka Bolivia.
Waa kuma ninka 4,400 oo sano ku aasnaa Qabriga cajiibka ah ee dalka Masar?
Khubarada cilmiga dhulka ee dalka Masar ayaa shaaca ka qaaday qabri noociisa uu dhif iyo nadir yahay oo aan la taaban muddo 4,400 oo sano ah. Mostafa Waziri, oo ah xog hayaha golaha sare ee dhowrista taariikhda dadkii hore, ayaa helitaanka qabrigan ku qeexay “Mid ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa ee la ogaaday tobannaankii sano ee la soo dhaafay”.
Maxaa loo aamini la’yahay Mukhtaar Rooboow (Abuu Mansuur)?
December 15th, 2018 Iftiinshe
Kulam Lagu Kala Boodey oo Caawa Dhex marey Siyaasiyiinta Mucaaradka iyo Hay’adda Culimada Soomaaliyeed .
Waxaa Fiidkii ka magaalda Muqdisho ka dhacay kulan ay soo abaabuleen Siyaasi Abdirahmaan Abdishakiir iyo Farah Shiekh Abdukadir oo ay la yeesheen hayada Culumada Soomaaliyeed.
Ugu horeyn Culumadii markay goobta timid kulankiina la furey ayaa waxaa Cimaamad lagu soo duubay bahal lacag ah oo ay ragani ku sheegeen ixtiraam iyo sooryo ay u qaybinayaan culimada balse culumadii ayaa gabi ahaan ba dib ugu celisay lacagtii iyagoo u sheegay inaaney qaadan Sooryada Siyaasiyiinta.
Maxaa Lagu xidhay Mukhtaar Roobow?!!
December 14th, 2018 Ruugcadaa
Sidaa la sheegay mukhtaar roobow iyo madaxweyne Farmaajo waxay isku ogaayeen Ayuu ka baxay mukhtaar roobow, wuxuuna ka beensheegay fikirkiisii xagjirnimada ahaa, maleeshiyaadna wuu sii diyaarsaday, maxaase ku dhacay?!!….
Dowlada Soomaaliya oo War kasoo saartay Xariga Mukhtaar Roobow
December 13th, 2018 Ruugcadaa
War Saxaafadeed goordhaw kasoo baxay Wasaarada Amniga gudaha Xukuumada Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay in xariga Sheekh Mukhtaar Roobow ay ka dambeyso dowlada Federaalka.
Yuu Mursal kula kulmay safarkii Qubrus (Cyprus)?
December 12th, 2018 Ruugcadaa
Intii u dhaxeysay 15- 18kii bishii November ayuu guddoomiyaha baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya safar qarsoodi ah ku tagay Jaziiradda Qubrus qeybta ay maamusho Turkey, balse shaaciyay in uu dalka Turkiga u tagayo arrimo qoys, laakiin waa meesha ay ka soo billaabatay fikradda mooshinka.
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya iyo Madaxweynaha Eritrea oo booqanaya Muqdisho
Ra’iisal Wasaaraha Itoobiya iyo Madaxweynaha Eritrea ayaa saakay la filayaa in booqashadii ugu horreeysay iyaga oo wadajira ku yimaadaan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.